Ecological Housing For Sale in Aurora, Ontario
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Bonke abanye abaThengisi beNdawo Indalo Ontario Aurora
I-aurora (isininzi: i-auroras okanye i-aurorae), ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba zizibane ezikumantla, izibane zasenyakatho (aurora borealis), izibane ezisezantsi (aurora australis), isibane sendalo kwisibhakabhaka soMhlaba, esibonwa ubukhulu becala kwimimandla ephezulu yeendawo eziphezulu ( ujikeleze iArctic neAntarctic). I-Auroras sisiphumo sokuphazamiseka kwimagnethi ebangelwa ngumoya welanga. Ezi ziphazamiso zihlala zomelele ngokwaneleyo ukutshintsha i-trajectories yamasuntswana ahlawulweyo kumoya we-solar kunye nemagnetospheric yeplasma. La masuntswana, ubukhulu becala ielektroni kunye neeprokhoni, zinika umoya okwindawo ephezulu (i-thermosphere / exvelo). I-ionization enokubangela kunye nokukhangela kweendawo zemozulu ezijikelezayo zikhupha ukukhanya okuhlukeneyo kombala kunye nobunzima. Uhlobo lwe-aurora, olwenzeka ngaphakathi kumacandelo ajikeleze imimandla ekhuselweyo, nayo ixhomekeke kubungakanani bokukhawuleza okufakwe kumasuntswana obonayo. Ukulungiselela iiprothokholi rhoqo kuvelise i-optical ekhutshwa njenge-athomu ye-hydrogen emva kokufumana ii-elektroni emoyeni. I-Proton auroras zihlala zijongwa kwiindawo eziphantsi.